Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » igalikuni » Ukuwa kweqhwa okukhulu kuvala isikhumulo sezindiza i-Istanbul
"Ngenxa yezimo ezimbi, zonke izindiza e-Istanbul Airport zimisiwe okwesikhashana ukuze kuphephe indiza," kusho isikhumulo sezindiza esitatimendeni ku-Twitter.
Uphahla olulodwa lwe I-Istanbul AirportIzikhumulo zempahla zadilika ngaphansi kweqhwa elinamandla, akuzange kulimale muntu, ngesikhathi isiphepho esiyivelakancane sigubuzesa isifunda esisempumalanga yeMedithera ngoMsombuluko, sadala ukucima ugesi kanye nesiminyaminya.
Isikhumulo sezindiza esimatasa kakhulu e-Europe saphoqeleka ukuthi sivale, samisa izindiza ezisuka eMpumalanga Ephakathi nase-Afrika ziye e-Europe nase-Asia namuhla.
Izikhulu zezokuvakasha zaseTurkey zithe ukuvalwa kwanamuhla kuphawula ukuvalwa kwesikhumulo sezindiza esisha kusukela sithathe indawo yesikhumulo sezindiza esidala sase-Istanbul i-Ataturk Airport njengesizinda esisha sezindiza. Turkish Izinkampani zezindiza ngo-2019.
“Ngenxa yezimo ezimbi, zonke izindiza zihamba I-Istanbul Airport zimisiwe okwesikhashana ukuze ziphephe endizeni,” kusho isikhumulo sezindiza esitatimendeni kuTwitter.
I-Istanbul Airport ihlinzeke abagibeli abangaphezu kwezigidi ezingu-37 ngonyaka odlule, yaba enye yezikhungo zomoya ezibaluleke kakhulu emhlabeni.
Airlines Turkish ithe imisa zonke izindiza ze-Istanbul Airport kuze kube okungenani ihora lesine ekuseni (4:01 GMT) ngoLwesibili.
Ukuvalwa kwezindawo kudale ikhanda elikhulu ezakhamuzini eziyizigidi eziyi-16 zedolobha elikhulu kunawo wonke eTurkey, lapho izimoto zashayisana zodwa zishibilika emigwaqweni ewugwadule nemigwaqo emikhulu yaphenduka izindawo zokupaka.
Ihhovisi lombusi wase-Istanbul lixwayise abashayeli ukuthi ngeke bakwazi ukungena edolobheni besuka eThrace, okuyisifunda esinqamula ingxenye yaseYurophu yaseTurkey kuya emngceleni osentshonalanga neBulgaria neGreece.
Inxanxathela yezitolo zivalwe kusenesikhathi, izinsiza zokulethwa kokudla zavalwa kanye nezindawo zokudayisa zedolobha ezidumile “zesimit” zimile zingenalutho ngenxa yokuthi abahlinzeki bempahla abakwazanga ukuphuma eqhweni.
Africa Airport Asia Bulgaria Europe Istanbul Emaphakathi Mpumalanga igalikuni Airlines Turkish
I-Panama Skydiving Isetha Injwayelo Entsha Yokumemeza...
Uhlelo Lokuthola Ukuvuza Kwamanzi Kwamagumbi Eseva Nedatha...
Umuthi womdlavuza we-Botanical pancreatic ubulala u-100% womdlavuza ...
I-Outlook Market ye-Healthcare Flooring Market Ikhava Ibhizinisi Elisha...
IBritish Airways ikhansela amakhulukhulu ehlobo layo elidumile...
Izimpawu zezifo zesibindi ezinamafutha, i-Liver Biopsy, kanye ...
Imakethe yamakhemikhali e-Surface Disinfectant kulindeleke...
Konke mayelana neSummer Pass entsha yezivakashi e-Abu Dhabi